Golaha Shacabka oo dhisay guddi cusub oo ka shaqeyn doono haqab-beelka cunada – Kalfadhi
August 20, 2019 August 20, 2019 Kalfadhi
Golaha Shacabka ee baarlamaanka fadaraalka ah ayaa abuuray guddi cusub oo heer baarlamaan ah kaa oo ka shaqeyn doona howlaha la xiriira haqab-beelka cunnada iyo nafaqada. Guddigan oo loogu yeeri doono Guddiga Suggida Cunnada iyo Nafaqada waxa uu si gaar ah ugu xil saaran yahay dedaalada lagu ciribtiri lahaa gaajada, helidda cunto nafaqa leh iyo sida looga faa’iidaysan lahaa Khayraadka dalka.
Munaasabadda kudhawaaqista Guddigan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho manta iyada oo ay kasoo qeybgaleen xildhibaanno iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gargaarka, wasiirka beeraha iyo waraabka iyo masuuliyiin kale.
Qaar kamid ah Gudiga iyo Xilhibaanada Baarlamaanka ee kasooqayb galay Xafladda Daahfurka Gudiga
Guddoomiye kuxigeenka guddigan Xildhibaan Ikraam Yuusuf Xirsi ayaa u sheegtay KALFADHI in dhismaha guddigan uu ku yimid heshiis ay wada gareen baarlamaanada dalalka Barriga Afrika oo ka shaqeynaya in si wadajir ah loola dagaalamo gaajada iyo saboolnimada Afrika. Guddigan ayaa qeyb ka ah yoolka Afrika ee 2030ka oo lagu doonayo in lagu ciribtiro gaajada iyo saboolnimada.
“Guddigan wuxuu kashaqayn doonaa siyaasadda dalkeena iyo sida loo ciribtiri lahaa gaajada, Sidii loo heli lahaa cunto nafaqa leh, iyo sidii Hooyada & Dhallaanku ay u heli lahaayeen nafaqo,” ayay KALFADHI u sheegtay xildhibaan Ikraam. Waxa ay intaas ku dartay in guddigan uu muhiim u yahay dadka Soomaaliyeed, oo baahi weyn u qaba in laga shaqeeyo haqab-beelka cuntada. Xildhibaan Ikraam waxa ay sidoo kale sheegtay in baarlamaanka Soomaaliya uu yahay kii afaraad ee Afrika ee hirgeliya guddigan.